ကျနော်တို့ထက်ပိုဆယ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, Professional ကထုံးစံမှုတ်တံမော်တာ, မှုတ်တံလေကြောင်းစုပ်စက်နှင့်ပန်ကာရေတိုင်ကီများ
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 0.5 -8 / Piece
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 20000-50000Piece / ပိုငျးပိုငျး
ပစ္စည်း: လူမီနီယမ် / သွပ်
ဒီမှာပြအဆိုပါထုတ်ကုန်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏နယ်ပယ်ကိုတင်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့မဆိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် အစိတ်အပိုင်းများ
အညီ သင့်ရဲ့ရန် ပုံဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာ။
Milling လမ်း: CNC
ကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းများ ချ. ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားတဲ့ဖိအားလူမီနီယံသေအထူးပြုထားတဲ့ OEM ထုတ်လုပ်သူတွေဟာတပြင်လုံးကိုလုပျနိုငျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထဲမှာမှိုဒီဇိုင်း-မှိုချမှတ်ခြင်း-စမ်းသပ်မှို -die သတ္တုများပုံသွန်း-စက်-မျက်နှာပြင်ကုသမှု-စစ်ဆေးရေးထံမှဖြစ်စဉ်ကို
ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၏စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းလွှမ်းခြုံ, ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, မော်တော်ကားပါဝါစနစ်များ, လျှပ်စစ်
forklifts, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်များနှင့်အခြားဆက်စပ်လယ်ကွင်း။
လူမီနီယမ် Lighting အိမ်ရာ:
ဖြေကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ဘို့တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူများမှာ
တစ်ဦးက: အားလုံးစိတျအပိုငျးထုံးစံဖောက်သည်ရဲ့ပန်းချီကားသို့မဟုတ်နမူနာအညီဖန်ဆင်း, စတော့ရှယ်ယာထဲမှာမများမှာ! သငျသညျကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ဆိုအစိတ်အပိုင်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်ကြင်နာရေးဆွဲ / နမူနာပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
မေး: သင်က get ပြီးနောက်ငါ၏အဆွဲလုံခြုံတော်မူမည်လော
A: ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မဟုတ်လျှင်တတိယပါတီဖို့သင့်ဒီဇိုင်းကိုလွှတ်ပေးရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Q: MOQ ကဘာလဲ?
ဖြေအများအားဖြင့်ကျနော်တို့ MOQ သတ်မှတ်ထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးခြင်း, စျေးနှုန်းချိုသာ။ အပြင်ကျနော်တို့အရည်အသွေးကိုစံသေချာစေရန် client များအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်နမူနာအောင်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
Q: ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီး ချ. လုပ်နိုင်သလား?
မေး: အိမျတျော၌သင်၏အအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု device ကိုကဘာလဲ?
ဖြေကျနော်တို့ NDT သတ္တုများပုံသွန်း၏မျက်နှာပြင်အောက်မှာ detect အဆိုပါသတ္တုများပုံသွန်းထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းစစ်ဆေးနေအဖြစ် Spectrometer, ဆန့စမ်းသပ်စက်နှင့် UT Sonic ရှိသည်။
ယခင်: အလူမီနီအပြောင်းအလဲနဲ့အစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေဆုံး OEM
နောက်တစ်ခု: Aluminum blower cover parts
အလူမီနီရေနံ Pump ခန္ဓာကိုယ်
လူမီနီယမ်အော်တိုရေနံ Pump Casting Die
အလူမီနီရေနံ Hydraulic Pump ခန္ဓာကိုယ်
အလူမီနီရေ Pump အိမ်ရာ
လူမီနီယမ်ရေနံ Pump သို့ကာစ် Die
အော်တိုသည် Pump Casting Die
ရေ Pump Casting Die
လူမီနီယမ်မှုတ်တံအစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေ